How to Pick the Best Probiotic Supplements - Dr.PhyoMaungMaung
ပထမဆုံးမှတ်ထားရမှာက ပရိုဘိုင်အိုတစ် ပိုးအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကျန်းမာရေးအကျိုးပြုပုံတွေမတူပါ။လူသိများတဲ့ အမျိုးအစားအချို့ကိုသူတို့ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံနဲ့ တွဲရေးပေးပါမည်။
* Bifidobacterium bifidum — မွေးကင်းစကလေးတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အူမကြီးအတွင်းမှာရှိပြီး ဗိုက်တာမင်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ ရောဂါပိုးများဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ပါတယ်။ခုခံအားစနစ်မြင့်တက်စေတယ်။ဝမ်းပျက်၊ဝမ်းလျောကာကွယ်ပေးပါတယ်။
* Bifidobacterium longum — အသည်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြင့်စေတယ်။ရောင်ရမ်းခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေတယ်။ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတယ်။
* Bifidobacterium breve — အူအတွင်းမှာနေပြီး ရောဂါပိုးကို နှိမ်နှင်းပေးပါတယ်။
* Bifidobacterium infantis —IBS ရောဂါကိုသက်သာစေတယ်။ဝမ်းချုပ်ခြင်း နှင့် ဝမ်းသွားခြင်းကို ပျောက်စေတယ်။
* Lactobacillus casei —ခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေတယ်။အစာအိမ်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော H pylori ပိုးကိုသေစေတယ်။
* Lactobacillus acidophilus —လေပွခြင်း၊နို့နှင့်မတည့်ခြင်းကိုသက်သာစေပြီး ရောဂါဖြစ်စေသော E. coli မျိုးစိတ်ကို ဖယ်ရှားသည်။ကိုလက်စတောကျစေပြီး ဗိုက်တာမင် ကေ ကိုဖန်တီးပေးသည်။
* Lactobacillus bulgaricus — အစာအိမ်ရဲ့ အက်ဆစ်ဒဏ်ခံနိုင်သော ပရိုဘိုင်အိုတစ်ဖြစ်ပြီး အဆိပ်ချေဖျက်ပေးပါတယ်။သဘာဝပိုးသတ်ဆေးကဲ့သို့သော အစွမ်းရှိသည်။
* Lactobacillus brevis —T killer cellအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ သွေးဖြူဥကို အားကောင်းစေပြီး H pylori ကို နှိမ်နှင်းနှိင်ပါတယ်။
* Lactobacillus rhamnosus —အသားအရေလှပစေသည်။ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအတွက်ကောင်းသည်။စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချသည်။
* Bacillus subtilis — ဝမ်းကိုက်ပိုးကိုသေစေပြီး ခုခံအားမြင့်စေပါတယ်။
* Bacillus coagulans —အဆစ်ရောင်ရောဂါပျောက်ကင်းစေတယ်။အဟာရစုပ်ယူမှုကို ကူညီပါတယ်။
* Saccharomyces boulardii — Crohn’s disease အတွက်ကောင်းပါသည်။
ဝယ်လို့ရတဲ့ Probiotics ဖြည့်စွက်စာအမျိုးအစားများပါတယ်။ဒါပေမယ့် အများစုက သိပ်အကျိုးမရှိပါ။အဓိကပြသနာက အစာအိမ်အက်ဆစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။probiotics ကို ဝယ်ရင်ထုတ်လုပ်ချိန်မှာပါဝင်တဲ့ ပိုးကောင်အရေအတွက်(the colony forming units (CFUs)) နဲ့ ပါဝင်တဲ့ ပိုးအမျိုးအစားတွေဖတ်လို့ရပါလိမ့်မည်။ပါဝင်တဲ့ ပိုးအများစုက အပူကြောင့်သေကုန်ကြတာများပါတယ်။ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အအေးမပေးနိုင်တာလည်းပါပါတယ်။
ဒါကြောင့်probiotics ဝယ်ရင်အောက်ပါငါးချက်ကို သတိပြုပေးပါ။
1. Brand quality — တံဆိပ်အမျိုးအစားပါ။Garden of Life, MegaFood and Axe Naturals တိုက နာမည်ရတံဆိပ်တွေပါ။
2. High CFU count — ပါဝင်တဲ့ပိုးကောင်အရေအတွက်ပါ။များများပါရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ပုံမှန်လူတောင် အနည်းဆုံး 15 billion ကနေ 100 billionထိသောက်နိုင်ပါတယ်။
3. Strain diversity — အမျိုးအစားများများပါအောင်ဝယ်ပါ။အမျိုးအစား ၁၀ -၃၀ လောက်ထိပါသင့်ပါတယ်။
4. Survivability — အူလမ်းကြောင်းမှာ ကြာကြာနေနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားပါအောင်ဝယ်ပါ။bacillus coagulans, saccharomyces boulardii, bacillus subtilis, lactobacillus rhamnosusတို့ကအူလမ်းကြောင်းမှာ ပိုနေနိုင်ပါတယ်။
5. Research — လေ့လာပါ။သုသေတနလုပ်ပါ။ကိုယ်အတွက်တကယ်လိုတဲ့ ပိုးအမျိုးအစားကိုရွေးဝယ်ပါ။
ဆေးဘူးပေါ်မှာရေးထားတဲ့ အချက်အပြင် သတိထားရရမှာတွေက
* Stability: Probiotics ကောင်းရဖို့အတွက် ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာ၊ထားသိုတဲ့နေရာ၊သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာ အေးမြဖို့လိုပါတယ်။အအေးပေး၊မပေးကြည့်ပါ။shelf stable ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ပါ။
* Date: ရက်စွဲသေချာကြည့်ပါ။ကုန်ဆုံးရက်နဲ့ဝေးလေ ပိုကောင်းလေပါ။
* Sugar: သကြားပါတာ သိပ်မကောင်းပါ။
( prebioticsဆိုပြီး probioticsတွေ အသက်ရှင်ဖို့တစ်ချို့ဆေးဗူးတွေမှာပါတတ်ပါတယ်။ prebiotics နဲ့ probiotics နှစ်ခုပေါင်းပြီး synbiotics လို့ခေါ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံး synbiotics မှာ အမျှင်ဓာတ်တွေပါပါတယ်။)
* Living vs. dead: သက်ရှိပရိုဘိုင်အိုတစ်(live strains )ကပိုကောင်းပါတယ်။
* Potency: အရေအတွက်ပိုးများလေ ကိုယ်အတွက်ပိုကောင်းလေပါ။
One thought on “How to Pick the Best Probiotic Supplements”
U Mya Soe says:
Healthy origins, puritan, nature bounty တို့ဘဲတွေ့ပါတယ်
Healthy origin က ပိုးဆယ်မျိုးမှာနှစ်မျိုးကတမျိုးကို့ ဆယ့်နှစ်ဘီလျှံစီပါပြီးကျန်တာတွေကတစ်ဘီလျှံစီလောက်ပါပါတယ် Healthy digestive and immune system လို့ဆိုပါတယ် ကျွန်တော်သောက်နေတာသုံးလကျော်ရှိပါပြီ တနေ့နှစ်လုံးသောက်ပါတယ် D3 လဲသောက်ပါတယ် နှစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်လာတဲ့အလာဂျီတော်တော်သက်သာသွားပါတယ် နှာချေတာ တခါ့တခါအနီကွက်ထွက်တာကတော့ကျန်နေပါသေးတယ်